.: Fountain Of Wealth (财富之泉)
Fountain Of Wealth (财富之泉)
The Fountain of Wealth, the largest fountain in the world, is located within the commercial complex of Suntec City in Singapore.
The fountain structure is made of bronze, and consists ofacircular ring withacircumference of 66 metres supported on four large slanted columns. The base area of the fountain is 1,683.07 square metres. In the design plan of Suntec City, where the five tower blocks represent the fingers and thumb ofaleft hand emerging from the ground, the fountain forms the palm of the hand.
Listed by the Guinness Book of Records in 1998
The base of the fountain is located underground, and on its base perimeter lies the main basement restaurant area of Suntec City. The circular ring top of the fountain is visible at ground level. During certain periods of the day, the fountain is turned off and visitors are invited to walk aroundamini fountain at the centre of the fountain's base for good luck. At night, the fountain is the setting forasmall laser show.
Fountain of Wealth ဆိုတဲ့ အပန်းဖြေ နားနေရာလေးကို City Hall MRT မှ Pennisula Plaza အရှေ့တွင် shuttle bus များ စီးပြီးသော်လည်းကောင်း၊ Suntec City shopping mall basement သို့ ခြေကျင်ဖြင့်လည်းကောင်း သွားရောက်နိုင်ပါတယ်။ ရောက်သွားတဲ့ အချိန်ကတော့ ညဘက်ဖြစ်လို့ laser show နဲ့ပြတဲ့ ရေပန်းပြကွက်နဲ့ သီချင်းငြိမ့်ငြိမ့်လေးတွေတောင် နားဆင်ခဲ့ရသေးတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်နေရင်းနဲ့ ရေပန်းက ရေထွက်အားကောင်းလွန်းလို့ ကင်မရာရော လူရော ရေတွေတောင် စင်ကုန်တယ်လေ။ စင်ကာပူရောက် သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးအတွက် အပန်းဖြေနားနေစရာကောင်းတစ်ခု အဖြစ် ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ အသေးစိတ်အကြောင်းကို ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ရခြင်းပါ။ ရောက်ဖူးတဲ့သူတွေလည်း ရှိမှာပါ။ တစ်ခါမှ မရောက်ဖူး၊ အဲ့ဒီနေရာကို မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် သွားသင့်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Waing at 11/19/2009 10:00:00 PM
လာဖတ်သွားပါတယ်။ အခုမှ ကျောင်းပိတ်လို့ အခုမှ ဘလော့ဂ်လည်ဖြစ်တယ်။
၀ိုင်းရေ Fountain of Wealth ကို လာဖတ်ပါတယ်ရှင်. ပုံတွေလှတယ်. .. .
အတော်လှတာပဲနော်။ မရောက်သေးတော့ လာငေးကြည့်မိတယ်ဗျာ။
ပုံလေးတွေ လာငေးသွားတယ်ဗျာ . . . :)
စလုံးရောက်ရင်တော့ အဲဒီနေရာကို သွားဖြစ်အောင် သွားရမယ်။